Amasayithi we-porn angama-10 amahle kakhulu, iyiphi indawo engcono kakhulu yezocansi? | Izindaba zamagajethi
Isiza Esingcono Kakhulu Sezocansi
UPablo Aparicio | | Ezocansi nezocansi
Sawubona Psst, Psst! Uma u. Sikutholile. Siyazi ukuthi ubukela i-porn kaningi. Ungakhathazeki, nathi futhi siyangabaza ukuthi kukhona umfundi oyedwa okuthi uma elawula ukusetshenziswa kwe-intanethi kancane, aqinisekise ukuthi akakaze ayisebenzise ukubuka ividiyo nabantu abanika injabulo emzimbeni (Macarena , Ay!). Okungenzeka ukuthi awazi i- indawo engcono kakhulu yezocansi lapho ungabona khona ikhwalithi yezocansi ngokuphelele, futhi kulapho le ndatshana inengqondo kakhulu.
Kulokhu okuthunyelwe sizophakamisa ukuthi Amawebhusayithi ayi-10 amahle kakhulu wezocansi ngaphandle kokukhokha cishe kunoma iyiphi idivayisi.
1 Amasayithi ayi-10 wamahhala wezocansi
2.5 Amantombazane aphelele
3 Izincomo zokubuka i-porn ekhaya
4 Ama-pornstars anconyiwe
4.1 Riley Reid
4.2 I-Malkova yami
4.3 UTori Omnyama
4.4 UNicole Aniston
4.5 ULexi Belle
4.6 Krystal boyd
4.7 UMelanie Rios
4.8 UDakota James
4.9 Bobbi Starr
4.10 Dillion Harper
4.11 U-Amarna Miller
Amasayithi ayi-10 wamahhala wezocansi
Yize amasayithi we-porn e-oda, lokhu kungahluka. Ohlwini ngifake amakhasi ayi-10 lokho ayidingi i-Flash Player, ezizosivumela ukuthi sizibone kunoma isiphi isiphequluli se-intanethi kanye nakumadivayisi eselula. Ngezansi unohlu oluphelele, sinethemba lokuthi ngemuva kokulibuka uzositshela ukuthi yiliphi isayithi le-porn elihle kakhulu kuwe. Futhi uma uneselula ye-Android, ungazama futhi uhlelo lokusebenza lwe-Porn Time ukubuka amavidiyo ngqo kuselula noma kuthebhulethi yakho.
Asikwenzi ulinde isikhathi eside, lawa amawebhusayithi amahle kakhulu wokujabulela okuqukethwe kwabantu abadala.
Siqale uhlu noNudevista. Akungenxa yokuthi ayingcono futhi ayimbi kakhulu kunamanye amakhasi amaningi, kodwa ngoba yinye uhlobo lokufuna. Ngokuqondakalayo, ungaqhubekisela phambili amakhasi kwi-portal, kepha amandla eNudevista ukuthi sifaka usesho futhi iwebhu yiyo ephethe ukusesha amakhasi amahle kakhulu lokho esikucelayo.
Kuyacaca ukuthi cishe noma yiliphi isayithi le-porn linenjini yalo yokusesha kepha, ngokunengqondo, lizofuna okuqukethwe kwalo kuphela. Uma sisesha izithombe ezingcolile "ezincane", sizobona kuphela ukuthi i-porn.com ihlobene kanjani nalokho kusesha. Kodwa-ke, uma senza usesho eNudevista sizothola imiphumela kusuka porn.com namanye amakhasi amaningi.
Uma ngabe okufunayo kuyikhasi elinesizinda esikhulu sezinkanyezi ezingcolile, i-4tube ingahle ikuthande. Ngaphezu kwezigaba nokuseshwa, ku-4tube sinayo Isigaba se-Pornstars, lapho sizobona khona uhlu lwamanani anenani elikhulu, yize futhi singazi-oda ngokulandelana kwezinhlamvu zamagama. Kuwebhusayithi efanayo sinethuba lokwazi ama-akhawunti we-Twitter alaba besifazane abahle, uma kwenzeka sifuna ukubalandela kunethiwekhi edumile ye-microblogging. Ngaphezu kwakho konke lokhu okungenhla, singakhetha (uma kutholakala) ukuthi yiliphi ikhwalithi yokubuka amavidiyo. Ngabe ukhona onikela ngaphezulu?
Ngabe uke wacabanga indlela elula yokuthola i-porn kunokubeka i-URL yaleli gama esiNgisini bese uhamba nayo ne-.com? Yebo ikhona. Futhi ngaphezulu kuhle. Ngaphezu kwamavidiyo amasha ansuku zonke, inezigaba eziningi, uma kwenzeka singafuni ukungena kusesho lwethu. Ngaphezu kwalokho, inenguqulo yeSpanishi, uma kwenzeka ungasiqondi kahle isiNgisi futhi ufuna ukwazi ukuthi ufundani. Kuyiqiniso, amavidiyo asolimini lokuqala, okuvame ukuba ngesiNgisi.
Iwebhusayithi: izithombe ezingasho
I-Pornhub ifuna ukuba yiyo I-Netflix yezocansi futhi yingakho ibhekwa njengekhasi le-porn elihamba phambili kubasebenzisi abaningi.
Inikeza ithuba lokukhokha u- $ 9,99 ngenyanga ngokungabi nakho ukukhangisa nokukwazi ukubuka amavidiyo ku-HD, kepha kuyinto engingaqiniseki ukuthi izobasebenzela. Masikhulume ngokungagwegwesi, lapho sibuka okuthile kusuka kuNetflix nakwezinye izinsizakalo zokusakaza ama-movie, isikhathi esincane esiku-inthanethi sesiqephu esisodwa sochungechunge, kepha futhi sibuka ama-movie acishe abe ihora nesigamu. Ku-Pornhub sizoba, kuya, kepha ezimweni eziningi ... isikhathi esingaphansi kwesiqephu sanoma iluphi uchungechunge sihlala 😉
Konke okungenhla kushiwo, i-Pornhub ingenye ye amasayithi we-porn ahamba phambili ngokufaneleka kwayo. Njenganoma yiliphi ikhasi elihle lalolu hlobo, linezigaba eziningi, inketho ngeSpanishi kanye nedatha enkulu lapho sizothola khona konke, noma yini esiyithandayo. Ngaphezu kwalokho, ayidingi iFlash Player, into engiyithatha njengebalulekile.
Ungavimba kanjani amasayithi we-porn ngaphandle kokufaka noma yiluphi uhlelo lokusebenza
Ngikhumbula ukuphawula komuntu engimjwayele owathi «Ngifaka i-Y kuGoogle futhi ibeka i-Youjizz ngaphambi kwe-YouTube. Izinto zamadoda«. Angihambisani nalezi zakamuva, kepha eyokuqala, ngokwengxenye, iyaqondakala. I-Youjizz ine-database enkulu enezinkulungwane zamakhasi, kepha inezigaba ezimbalwa kunamanye amasayithi we-porn (aphansi ezansi).
Isebenza futhi ngaphandle kweFlash Player kepha, ngokungafani namakhasi ashiwo ngenhla, ivula amavidiyo ewindini elisha kwezinye iziphequluli ezinesidlali esihambisana ne-HTML5.
Njenganoma iyiphi indawo enhle ye-porn ebiza usawoti wayo, i-Tube8 nayo ine-database enkulu futhi iyatholakala nangeSpanish. Lapho kuphelelwa khona isikhathi kancane kunani lezigaba, ngakho-ke uma singenayo intshisekelo kulokho esikubonayo ekhasini eliyinhloko, kuzofanele senze ukusesha ngesandla (xD) kwengqondo.
«I-porn nje, akukho mbhedo ». Ngaphansi kwalesi siqubulo sinelinye ikhasi elihle le-porn elinokuqukethwe kwabantu abadala. Unohlu olukhulu lwezigaba olutholakalayo futhi olunalo Isigaba sevidiyo se-HD, konke mahhala. Ngakolunye uhlangothi, nayo ine- uhlobo lokuxhumana nabantu lapho ungabeka khona amazwana kumavidiyo afana ne-YouTube futhi uthumele nemiyalezo kwabanye abasebenzisi bese wenza abangane.
I-Pornotube ingelinye lalawo makhasi akhumbuleka kalula ngenxa ye-YouTube. Inemikhakha, noma ingekho eminingi, nesigaba okufanele usibone amavidiyo afunwayo (VOD) lapho singabuka khona wonke ama-movie noma kunini lapho sifuna khona. Yebo, lokhu ama-movie akhokha. Ake sithi amandla we-Pornotube yingxenye yawo «yesitolo sevidiyo», ngoba ikuvumela ukuthi uthenge futhi uqashe ama-movie ngentengo efana naleyo esingathenga ngayo ama-movie angewona ama-X kunoma yisiphi isitolo. Woza, i-Pornotube yilokho okusweleka i-iTunes, i-Google Play noma i-PlayStation Store.
Ngemuva kokuthi i-YouTube yethule inguqulo ekhokhelwayo yengxenyekazi yayo yevidiyo, abasebenzisi abaningi benze amahlaya ahlobene negama layo. IGoogle ilinike igama elithi "YouTube Red" futhi kukhona iwebhusayithi yezocansi ebizwa ngeRedtube. Kuyasondela, akunjalo?
I-Redtube inezigaba eziningi kanye nesigaba se- pornstars, yize ingafani ne-4tube. Singakwazi bhalisela iziteshi zabo ukuze ungaphuthelwa noma iyiphi ividiyo entsha elayishwe negama lakhe. Ngokufana ne-YouTube, woza.
Futhi sigcina sesinenye iwebhusayithi ebhekwa njengeyona ndawo ehamba phambili yezocansi yize ekuqaleni kubonakala sengathi ayinalutho olukhethekile kepha, njengoba igama layo liphakamisa, maningi "amantombazane aphelele". Ku-Perfect Girls bagxila kuyo umabhebhana, yize kungenjalo njalo, ngobuhle obukhulu. Noma, ngokunengqondo, uma sikhuluma ngale webhusayithi ohlwini lwamakhasi wezocansi, amantombazane awavamisile ukuba yedwa, yize kunjalo futhi.
Futhi kuhle, lezi iziphakamiso zami zamawebhusayithi we-porn. Impela unezinye ezihlukile futhi eziningi zazo zizoba zinhle kakhulu, angingabazi ukuthi kungahle kube nabantu abachwepheshile kunami kulokhu 😉 kepha ngikutshele ngamakhasi amahle, anokuqukethwe okuningi nokuhlukahlukene futhi okusebenzayo kumadivayisi eselula, into ebalulekile namuhla.
Izincomo zokubuka i-porn ekhaya
Manje njengoba usuyazi ukuthi yiliphi isayithi le-porn elihamba phambili (noma amasayithi we-porn ahamba phambili uma unamathela kokuningi okungenhla), sizokunikeza amathiphu amaningana wokubuka okuqukethwe kwabantu abadala ekhaya ngaphandle kokuzingelwa.
Uma ikhompyutha yabiwa, mhlawumbe awufuni noma ngubani azi ukuthi ubukade uvakashela izingosi ze-porn, ngakho-ke nazi izeluleko.
Into engcono futhi elula kunazo zonke esingayenza sula umlando ngemuva kokubuka izithombe ezingcolile. Ukususa umlando kuzokwenziwa ngandlela thile ngokuya ngesiphequluli esisisebenzisayo. Isibonelo, eSafari kuzofanele siye kwimenyu ye-Safari bese ukhetha u- "Sula umlando".
Qiniseka ukuthi asixhunyiwe ize. Ngalokhu ngisho, ngokwesibonelo, i-akhawunti yakwaGoogle, iFirefox, njll. Lezi zinsizakalo zingasindisa nokuvakasha kwethu ku-intanethi, into engase ingasithandi.
Usar Ukuzulazula kwe-incognito. Cishe ukukhohlwa, enye into esingayenza ukuqala ukuphequlula okungaziwa. Lapho usebenzisa isiphequluli kumodi ye-incognito, akukho lutho oluzolondolozwa emlandweni wethu futhi, ngombono, ukusesha kwethu ngeke kusindiswe nakho.
Usar proxies. Uma ungumuntu oyi-maniacal ngakho konke lokhu, ungahlala usebenzisa ummeleli ukufihla ubuwena. Indlela enhle yokwenza lokhu ukusebenzisa indlela ye- Isiphequluli se-Tor, ngoba isivele ikwenza ngokuzenzakalela. Vele, eminye imisebenzi yayo yezokuphepha kuzofanele ikhutshazwe noma ngeke sabona lutho.
Ngemuva kokubona okuhle kakhulu amawebhusayithi ezocansi kumahhala ku-Intanethi, nalu uhlu lwabadlali abaziwa kakhulu emhlabeni.
URiley uthi akazalelwanga ukuba "yisiwula", ngakho-ke kwesinye isikhathi uba nzima ukuthola isenzo. Lokho kushiwo emcimbini lapho wayenabalandeli abaningi (ngangingeyena, eh?), Kepha ngubani ongasho. Lapho efika phambi kwamakhamera, lo mfana oneminyaka engama-24 akanankinga, kunalokho. Kubukeka sengathi uyayithanda futhi ihlala ivuliwe, okusiza abantu asebenza nabo, kunjalo.
URiley unqobile imiklomelo emibili ye "Starlet" yonyaka, ngo-2012 nango-2013. Ngaphezu kwalokho, ngo-2013 kwaba uqokelwe imiklomelo eyisikhombisa kwehlukile Ngikushiya lapho.
UMia ubelokhu kule porn kuphela iminyaka engu-3, ​​kepha usezuzile Imiklomelo emi-5 isatshalaliswa izigaba ezahlukahlukene namafemu. Ngaphezu kwalokho, kuye kwaba futhi uqokelwe eminye imiklomelo eyi-11 ngaphezulu, into engatholakali kunoma ngubani. Lo muhle oneminyaka engama-23 ungomunye obonakala sengathi uma sesikhanyise i-fuse, akekho ozomvimba, into engakhali muntu ngayo 😉
UMichelle Chapman mdala kancane kunalezi ezimbili ezedlule. Eminyakeni engama-27 ubudala nangeminyaka eyisithupha yokusebenza, uzuze okungaphansi kwalokho Imiklomelo emi-18 yamabhayisikobho e-porn, futhi lokho akubalwa amagama abekiwe abawatholile. UTori ungubuhle, kokubili emajikeni akhe nasebusweni bakhe futhi, uma ufuna ukwazi ukuthi kungani ewine izindondo eziningi kangaka, kuzofanele umbone esebenza.
Eminyakeni engama-28, uNicole ubelokhu uqokelwe imisebenzi yakhe emithathu. Ubenobunye bobuso ebengibuthanda kakhulu yingakho ngingeza kulolu hlu, yize, ngokombono wami, uwonakalise ngokuphelele umzimba wakhe eminyakeni yamuva nje, wafaka amabhola ngaphansi kwentamo yakhe futhi wenyusa ivolumu yakhe izindebe kakhulu. Into enhle kakhulu ngoNicole Aniston, ngaphandle kokungabaza, yimisebenzi yakhe yokuqala, eshisayo, enhle futhi ehambisanayo.
Yize kungahle kungabonakali njengokuvela ebusweni bakhe obuyintombazane, uJessica McComber naye uneminyaka engama-28 ubudala kepha, ngokungafani noNicole Aniston, akakathinti lutho emzimbeni wakhe. Noma, awuvumelanga udokotela ohlinzayo enze noma yini emzimbeni wakhe, ngoba ukuzithinta, uzithinte kakhulu, yena nabanye others Qongelela Imiklomelo engu-14 yezocansi futhi ine-hypoxyphilia.
Eyaziwa nangokuthi i-Angelica, le I-russian eneminyaka engu-22 ubudala kuzofanele ngikhulume ngokuzayo. Uhlale kule porn cishe iminyaka engu-4, kepha kubonakala sengathi kuthatha impilo yonke. Akuzange kunqotshwe noma kuphakanyiswe noma yimiphi imiklomelo kepha, ukube bekuya ngami, bengizobe senginayo eminingi. Impela uma ubheka uzovumelana nami.
Ubuhle baseLatin obuza kithi buvela Colombia. USara Vélez akayamukeli imisebenzi ehlanganisa ukuya ocansini ezimpundu, nokuyinto abadlali abalingisi abambalwa abangafuna ukuyenqaba. Kusukela abonakala lapho eseneminyaka engu-18 ubudala, uzibeka esimweni esibalulekile embonini yezocansi futhi ubelokhu ekhona uqokelwe imiklomelo emi-4. Ngokuqondakalayo, uma ngimfakile kulolu hlu kungenxa yokuthi bengizomnika umklomelo nokunye
Bhala leli gama. Ngokuqinisekile kuzophinde kunikeze okuningi okuzokhulunywa ngakho ngokuzayo. Ubekade ekule porn isikhathi esincane kakhulu, kepha ubuso bakhe obuhle buhlala kulokho nje, ubuso bakhe. Uyayithanda induku futhi, uma kungaba nomuntu onebala elinelungu elihle, konke kungcono. Funa ividiyo yakhe kumawebhusayithi adlule futhi uzozibonela.
UBobbi Starr ungumlingisi omdala kunabo bonke kulolu hlu, oneminyaka engama-32 ubudala. Ngikungezile ngoba kubonakala sengathi, ngokungafani noMelanie Rios, ayinqabi lutho. Ngaphezu kwalokho, uthanda `` ngemuva '', ngakho-ke bangenza noma yini kuye ngaphandle kokukhononda. Uthanda futhi 'ukuphathwa kabi', okukhethekile kubantu 'abanodlame'. Qaphela, kubalulekile ukubona izingcaphuno. Akekho umuntu ophatha kabi i-porn also Futhi inemiklomelo eyi-13, by the way.
Okulandelayo ohlwini uDillion Harper, umuntu onobuhle obuyinqaba ebusweni bakhe, kodwa ongokoqobo emzimbeni wonke wakhe. Inamanye amabele okuthi, ngokombono wami, babe okumangazayo ukuba kwemvelo futhi ngicabanga ukuthi kumfanele ukuba kulolu hlu ngokufaneleka kwakhe, noma ngabe isikhungo sezocansi besingafuni ukumnika noma yimiphi imiklomelo. Ukuthi bayishiyela thina, ukuthi sikunikeze lokho ekufunayo 😉
Uma ufuna i-pornstar yaseSpain, kufanele ucabangele i-Amarna. Lo mfana oneminyaka engu-24 uzuze umklomelo womlingisi we-porn ohamba phambili we-2014, kanye newebhusayithi enhle kakhulu yomuntu siqu. Ungumbhali, umkhiqizi nomqondisi. Woza, wenza konke futhi cishe konke akwenzayo kuhlobene nezocansi.
Yini oyithatha njenge indawo engcono kakhulu yezocansi? Sitshele ngamawebhusayithi owavakashela kaningi ngoba sesivele sazi ukuthi kwi-Intanethi kunezindlela eziningi zokujabulela i-porn ephephile (futhi ejabulisayo).
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ezocansi nezocansi » Isiza Esingcono Kakhulu Sezocansi
U-Ignacio Sala kusho
Unina wemvukuzane. Ubone izithombe ezingcolile ezingakanani ukubhala lo mbhalo ???
Phendula u-Ignacio Sala
UPablo Aparicio kusho
Angizange ngibe yi-xD
Phendula uPablo Aparicio
UJuan Colilla kusho
Noma ngubani oza nalesi sihloko ngincoma idokhumentari yeNetflix ethi "Kufunwa Amantombazane Ashisayo", ukubona ukuthi bayaqhubeka yini nokuxhasa le mboni ngemuva kokuyibuka, inyanga yokuqala imahhala ngakho-ke azikho izaba, nakanjani ngingasusa zonke izithombe zobulili ezingcolile Ukucindezela inkinobho ngeke nginqikaze ukukwenza, futhi ngiqaphele, angizukuba ngumqambimanga, kwesinye isikhathi ngiyayibona, noma kunjalo bengingeke nginqikaze umzuzwana ukuqeda le mboni, futhi bengizoshisa kakhulu.
Phendula uJuan Colilla
Jefri giron kusho
Phendula kuJefri Giron
U-Alfonso Real kusho
Kuyacaca ukuthi usuzibhalile ukuthi uzoqhamuka nohlu olubanzi kangaka. Ukuphela kokufanele ukwenze ukwenza ukulinganisa ngamamaki nokuhlolwa ngakunye. Eziningi zazo zihamba phambili kwi-porn, ngingangeza ezinye.
Phendula u-Alfonso Real
umshayeli webhulogi kusho
UMartin Varzal kusho
Ukukhetha okuhle kakhulu, yize bekuzofaka uLisa Ann noma u-Esperanza Gomez
Phendula uMartin Varzal
KUNGANI UFUNA UKUSUSA I-PORN! KUNEZINTO EZININGI EZIMBI EZISETSHENZISWAYO NEZIJIKELEZA EMHLABENI WETHU. UMA UNGAYITHANDI ... UNGAYisebenzisi. SIYAYIHLONIPHA. HLONIPHA NAWE KULABO ABASEKHONWENI.
Igama lami ngingu: sabrina. Ngikule nethiwekhi ukutshela ngale ndoda enkulu futhi enamandla eyangenza ngaba ngowesifazane ojabule kunabo bonke emhlabeni 1 - yaba nezingane engizifunayo isikhathi sonyaka futhi ngawina i-mega sena lottery ngakho-ke ngathembisa ukufakaza kumanethiwekhi ahlukahlukene yalezi zinzuzo.
Kumuntu ngamunye kulezi ngokulandelayo:
-Bonke abantu bafuna ukuceba ngomlingo omhlophe.
-Bonke abantu abafuna ukudumisa.
-Konke, akekho owayefuna udumo.
-Konke, akekho owayefuna injabulo.
-Konke lokho akekho umuntu okwelapha isifo
-Noma ngubani ofuna ukuba nezingane.
-Noma yimuphi umuntu ozophumelela emincintiswaneni noma emidlalweni yenhlanhla.
-Wonke umuntu ufuna ukuheha abesifazane.
-Wonke umuntu ofuna ukuheha amadoda - konke, akekho umuntu owayefuna ukuthandwa.
-Wonke umuntu ufuna ukwenza isivumelwano nosathane.
-Noma yimuphi umuntu ofuna ukuphila isikhathi eside.
-Wonke umuntu ofuna ukuba nguSanta
-Noma yimuphi umuntu ofuna ukwenza ukungabonakali
-Persona bonke abangenakuzisiza noma kwesinye isikhathi abenelisi kahle owesimame noma owesilisa
-Wonke umuntu ofuna ukusebenzisa uhlamvu lwemilingo
Xhumana nale imeyili futhi uzobona okulandelayo:
Imeyili: lediableexiste@gmail.com noma ngeWhatsApp: 00229 956 864
Bengikuthanda konke ngezihloko zabo, ikakhulukazi i-rylei reid enhle kakhulu, ngimusha kulokhu, futhi ngineqoqo elihle lamavidiyo, i-cute horny
Kucelwa umuntu ophuthumayo, ukuba asebenze emisebenzini eyisisekelo yasehhovisi, NGAPHAMBI NOMA NGAPHANDLE KWESIPHUMA, uma udinga imininingwane ethe xaxa LOKHO OKULINDELEKILE, xhumana MANJE neselula 3208420630.
ULuana Rodrigues kusho
Ngabe ubufuna izindlela zokuxhasa ngemali ukuthenga kwakho okusha kwekhaya, ukwakhiwa, ukubolekwa kwempahla, ukulungiswa kwemali, ukuqiniswa kwesikweletu, izinhloso zomuntu siqu noma zebhizinisi? Uyemukelwa esikhathini esizayo! Ukuxhaswa ngezimali kwenziwe nathi. Xhumana nathi, ngoba sinikela ngezinsizakalo zethu zezezimali ngenzalo ephansi futhi engabizi kakhulu engu-2% yemalimboleko yesikhathi eside nesikhathi esifushane. ramzanhelp31@gmail.com
Phendula uLuana Rodrigues
Julayi C kusho
kufanele uqaphele ukuthi amanye ala mawebhusayithi anama-virus eh
Phendula uJulio C
Ikhasi le-porn elihamba phambili kunawo wonke ama-Xvideos, angiqondi ukuthi kungani abantu bathanda i-pornhub ngaphezu kwama-Xvideos kepha ama-Xvideos angcono kangangezinkulungwane.
MFOWETHU UYIWEBHESHI ENGCONO KAKHULU ENGABUKA NGEMPELA AMAVIDIYO E-HD LOKHO NGOKUQALA KODWA MAHHALA
IHuawei Band 2 ilulama umongo wamasongo wokuqina
Ukuvuza kwe-Moto G5S Plus kuveza ukucaciswa nesithombe esisha